आहा ! कस्तो हेन्डसम भन्ने लाग्छ – Rajdhani Daily
आहा ! कस्तो हेन्डसम भन्ने लाग्छ
एलिजा कटुवाल २०५० सालमा जन्मिएकी हुन् । उनी फेसन डिजाइनर र ग्ल्याल्मर क्षेत्रमा जम्न चाहन्छिन् । उनी नेपालका रमणीय क्षेत्रमा पनि घुम्न चाहन्छिन् । उनी ब्वाइ फ्रेन्डले धोका दिए अर्को खोजेर विवाह गर्ने बताउँछिन् । शुक्रबार राजधानी दैनिकको कार्यालयमा उनीसँग प्रेम, विवाहलगायतका विषयमा भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आहा † कस्तो हेन्डसम भन्ने लाग्छ । मलाई राम्रो लागेर पाइहालौं भन्ने लाग्दैन । किनकि मेरो ब्वाइ फ्रेन्ड छ ।
तपाई पनि मोडलिङ क्षेत्रमा इच्छुक हुनुहुन्छ ? यस क्षेत्रमा ‘करिअर’को ढोका खोल्न चाहनुहुन्छ ? आउनुस्, हामी
साथ दिनेछौं । सम्पर्क
Tags: आहा कस्तो हेन्डसम भन्ने लाग्छ